September 2013 - Page 3 of 43 - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa caawa meelo badan oo ku yaalla Soomaaliya lagu arkay arrin mucjiso ah, taasoo ah wax daruur u muuqda oo hawada ku jirta. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobalada Hiiraan, Galgaduud, Shabeellaha Hoose, iyo Muqdisho ayaa caawa arkay wax goobaabo camal ah oo Ifaya ama nuuraya, oo dhowr daqiiqo hawada ku jira kaddibna la waayay. Goobjooge ku…
iftineducation.com – Nabada Caasimada Soomaaliya Ka Hana Qaaday Ayaa Waxay Suura Galisay In Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho Xiliyada Habeenkii Ay Dib Ugu Soo laabato Xaflado Iyo Munaasabado Lagu Gaaro Saq dhexe. Hoos Ka Daawo Showgii Hibo Nuura Ee Muqdisho Xusuusta Ku Reebay
iftineducation.com – Dolwada Kenya ayaa sheegtay inaysan go’aansan doonin inay dib ciidamadooda ugala soo baxaan kadib weerarkii Westgate iyo hanjabaadii uga timid dhinaca Al Shabaab. “…Waxaan markii hore u galnay dalka Soomaaliya maadaama Al Shabaab ay khatar ku noqotay amaanka Kenya, waana sii wadaynaa hawlgalkaasi illaa laga xaqiijinayo danaha iyo amaanka dalka…” ayuu yiri wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya Mr.Joseph…
iftineducation.com – Raysalwasaarihii hore ee dalkaasi Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa xisbigiisa kala baxay isbaheysiga Xukuumada Talyaaniga. Silvio Berlusconi ayaa ku micneeyey tilaabadan mid ay uga soo horjeedaan qorshaha xukuumada Talyaaniga ee dhanka miisaaniyada & Canshuuraha, balse Raysalwasaaraha Talyaaniga Enrico Letta ayaa sheegay in arrintan ay salka ku heyso xukunkii Berlusconi lagu xukumay musuq maasuq. Raysalwasaare Letta ayaa ku tilmaamay tilaabadan Berlusconi…
iftineducation.com – Sheikh Maxamuud C/llahi Gelle, oo ah Guddoomiyaha Ururka Xizbulah ee Somaliland, ayaa sheegay inuu xaq yahay Weerarkii lagu qaaday Xarunta Ganacsiga ee dhawaan lagu weeraray Magaalladda Nairobi. Sheikh Gelle waxa uu sheegay in Weerarka noocaasi ah uu yahay mid laga doonaayo inuu fuliyo ruux walba oo Muslim ah, isagoona sheegay inay mudan tahay in Alshabaab lagu amaano Guullaha ay…
iftineducation.com – Wariye Micheal Scott Moore oo ah Suxufi u dhashay dalka Maryekanka, ayaa waxaa sanadkii labaad uu u afduuban yahay kooxaha burcad badeeda ee Soomaalida. Burcad badeeda Soomaalida, ayaa waxay ninkaan qafaal ahaan ugu heysataa Deegaan ka tirsan Gobolka Mudug, inkastoo aan si sax ah loo garaneyn, halka dhabta ah ee ay ku hayaan. Kooxaha burcad badeeda, ayaa maalmo kahor…
iftineducation.com – Kooxdii ka danbeysay weerarkii ka dhacay Magaalada Nairobi ayaa waxaa soo baxaya inay ka baxsadeen goob ay si gaar ah horay ugu sii diyaarsadeen.,video sir ah oo la helay ayaa muujinaya in Kooxda Weerarka qaaday ay sameysteen meel gaar ah oo ay ka baxsadaan. Baaritaano la sameeyey kadib ayaa la sheegaya in Kooxdu ay u baxsadeen sida raha oo…
iftineducation.com – Sirdoonka dalka Ingiriiska MI5 ayaa sheegay in gudaha waddankasi ay ka baadi gobayaan ku dhawad 60-qof oo Soomaali ah kuwasi oo xiriir dhow la leh kooxda Al-shabaab. Saraakil u hadashay wasaarada arimaha dibada dalka Ingiriiska ayaa shegay iyagoo warbahinta la hadlay in ay jiraan liis cusub ay sirdoonka soo sareen oo ay ku sheegayaan tiro Soomalai jihad doon ah…
iftineducation.com – Ma fududa inay haweeneydu ninkeeda siduu rabo u raalligeliso, gaar ahaan kolkay arrinru galmo ku lug leedahay. Hogaanka Qabo: rag oo dhami way u riyaaqaan kolkay arkaan haweenkooda oo galmada hoggaanka u haaya. gabaryahay waa in aanad ka xishoon inaad gacalkaaga ugu baaqdid si aan bareer ahayn una tustid inaad galmo doonaysid, sida adigoo horaadka saara, madaxa iyo garka…
iftineducation.com – Waxaa Maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho kasoo dagay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Maxamed Axmed Qoomaal oo mudo kabadan 20-sano dalka ka maqnaa. Fanaanka oo u muuqday mid aad ugu faraxsanaa in uu maanta Dalka kusoo laabto kana soo dago Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa durbo shumis dhulka ku bilaabay iyadoona la arkayay…